အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးနှင့် CTUM ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံခြင်း – CTUM
Solidarity Letter from AFL – CIO ( America’s Unions) and SAK, SASK, STTK ( Finland Unions)
Published by ctum at February 12, 2019
The U.S Ambassador to Myanmar H.E Mr. Scot Marciel visits CTUM head-office on 11th February 2019 in Yangon, Myanmar.
# The United States Ambassador
# Confederation of Trade Unions of Myanmar
The delegation led by the U.S Ambassador to Myanmar hadavisit and met with the leaders of the Confederation of Trade Unions of Myanmar (CTUM) and its sectors at the Solidarity Hall of CTUM in East Dagon Township in Yangon, Myanmar on 11th February 2019.
On this occasion, the CTUM’s leaders presented the reasons to suspend its participation from the tripartite mechanism, the current challenges that CTUM is facing, and the CTUM’s ongoing implementation work and activities for developing of trade unions to the Ambassador of the United States.
The leaders explained the latest situation of the peaceful demonstration jointly conducted by CTUM and its counterpart, MICS-TUs to H.E Mr. Scot Marciel and the delegation as well.
The Ambassador also expressed his opinions on the discussions of CTUM Leaders.
( ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ၊ CTUM သွေးစည်းညီညွတ်ရေးခန်းမ)
Meeting with H.E Scott Marciel ambassador of US in myanmar and CTUM
အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ် H.E Scott Marciel ambassador of US in myanmar ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ နှင့် CTUM ရှိ ကဏ္ဍအလိုက် ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ရက်နေ့တွင် အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် CTUM သွေးစည်းညီညွတ်ရေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် သုံးပွင့်ဆိုင်ယန္တရားမှ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းအပေါ် သဘောထားများ၊ လက်ရှိ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရသည့်အခက်အခဲများနှင့် ၁၀ ရက်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် CTUM နှင့် MICS ဦးဆောင်သော ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက် ၄င်း၏ အမြင်သဘောထားများကိုလည်း ပြန်လည် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmedia%2Fset%2F%3Fset%3Da.1041943699350065%26type%3D3&width=500″ width=”500″ height=”772″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>